Ishe weRings: Hondo muNorth mutambo, uri kutengeswa kwenguva shoma | Ndinobva mac
Nhasi tese kana vangangoita tese tinoziva saga raIshe weRings. Ino nguva ndiwo mutambo uyo uchatisvitsa zvizere kuUhama Hwepasi hweMiddle Earth uye isu Ichave nguva yekurwira masimba erima eSauron. Ishe weRings: Hondo kuchamhembe ndiyo isingambo-kutaurwa-nyaya yema magamba aya nehama dzavo dzisingazungunuke idzo dzinotipa nguva yakanaka pamberi peMac mumutambo unosanganisa chiito chemunhu wekutanga pamwe nebasa- kutamba.
Panguva ino mutambo wakagashira kwakanyanya kuderedzwa mumutengo wayo kubva pa19,99 euros kusvika ku4,99 euros izvo zvinodhura izvozvi. Uku kudzikisira ndekwenguva yakatarwa uye zviri pachena kuti isu hatizive kuti ichagara kwenguva yakareba sei, saka kana iwe uchifarira kutenga kwako, mutengo mutsva unogona kukufarira. Kune rimwe divi, usati waita kutenga, zvakakosha kuti utarise zvidiki zvinodiwa kuti ukwanise kutamba neMac yako sezvo vachida processor: 2.0GHz, RAM: 4GB, Graphics Plate: 256MB, Mahara dhisiki nzvimbo ye 11GB.
Zvakare anotevera makadhi emifananidzo haana kutsigirwa: ATI X1xxx dzakateedzana, ATI HD2xxx dzakateedzana, Intel GMA dzakateedzana, Intel HD3000, NVIDIA 9400, NVIDIA 3xx dzakateedzana, NVIDIA 7xxx dzakateedzana, uye NVIDIA 8xxx dzakateedzana. Aya makadhi anotevera anoda kuti iwe uve neinokwana 8GB ye RAM mune yako system: Intel HD4000. Uyu mutambo hausi parizvino unoenderana nemavhoriyamu akaumbwa seMac OS Plus (kesi inonzwisisika).
Tiri kutarisana neimwe yemitambo iyo kunyangwe chiri chokwadi kwete vese vashandisi vanoziva, zvirokwazvo isu takanzwa nezve saga uye zviri pachena nezve mafirimu kana mabhuku. Ino nguva yaive Feral Inopindirana Iye munhu anotarisira kuvandudza mutambo uyo watinogona kuwana kubva munaGunyana 2013 muMac App Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mac App Store » Ishe weRings: Hondo muNorth mutambo, uri kutengeswa kwenguva shoma
Xcode uye Swift 3 inogadziridzwa nerutsigiro rweIOS 10